कोरियामा भन्दा धेरै कमाई, बङ्गुर पालनबाट - कृषि पत्रिका
कोरियामा भन्दा धेरै कमाई, बङ्गुर पालनबाट
आइतबार ०५ माघ, २०७६	comments
पाल्पा। मिहिनेत गर्ने बानीको विकास गरी स्वदेशमा नै पसिना बगाउन तयार हुँदा विदेशी भूमिमा टेक्न रहर गर्नु पर्दैन । स्वदेशमै पसिना बगाउने तयार भएका नेपाली युवाहरु स्वदेशमा नै कोरियाको तुलनामा बढी आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने नमूना हो ।
पाल्पाको माथागढी गाउँपालिका–४, झडेवाकी यमकला काम्मुको बङ्गुरपालन व्यवसायमा एकपटक पुग्नैपर्ने बङ्गुर फार्म हो । काम्मुले बङ्गुरको पाठापाठीको कारोवारबाट दुई वर्षमा रु. २४ लाख १५ हजार आम्दानी गर्न सफल हुनुभयो ।
वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका तथा स्वदेशमा बेरोजगार युवा भन्नेहरु एकपटक काम्मु बङ्गुर फार्म पुगी व्यवसायप्रति लाग्न आकर्षित गर्छ । बङ्गुरबाट कोरियामा भन्दा बढी आम्दानी हुन्छभन्दा अनौठो लाग्ला तर अनौठो मान्नु पदैन । दुई वर्षको अवधिमा ४८३ वटा बङ्गुरका पाठापाठी बेच्नुभयो । बङ्गुरका पाठापाठीलाई रु पाँच हजारमा सहज रुपमा कारोवार हुन्छ ।
काम्मुले १८ वटा बङ्गुरका पाठापाठी सङ्कलन गरी व्यवसाय शुरुआत गर्नुभयो । उहाँको फार्म अहिले ७० वटा बङ्गुरका भालेपोथी छन् जसमध्ये ३० बङ्गुरका पोथीले बच्चा पाउँछन् । स्थानीयस्तरमा प्रतिकिलो रु. २४० मा मासु खपत हुन्छ । यहाँ उत्पादित बङ्गुर किन्नका लागि तानसेन, बुटबल, पोखरालगायत स्थानका मानिस घरमा आउँछन् । छ महिनामा बङ्गुर सुत्केरी हुने गर्छ । औसतमा एउटा बङ्गुरका माउले दशवटा बच्चा जन्माउँछ । बङ्गुरका बच्चालाई एक महिनामा आमादेखि छुटाउनुपर्ने सञ्चालक काम्मुको भनाइ छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको आव २०७५/७६ सालको कृषि अनुदान कोषको रु १० लाख आर्थिक सहयोग र रु. १५ लाख काम्मु लगानीमा जिल्ला भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ कार्यालय पाल्पाको समन्वयमा स्थापित बङ्गुर फार्म हो । नेपाली बङ्गुरको मासु चीनले आर्यात गर्ने भनेपछि बङ्गुरपालन पेशाप्रति युवाको आकर्षण बढ्दो छ ।